Isiokwu a na-akpọ “The Solowheel: lelee ọhụrụ a giratory usoro” e dere site Kit Buchan, n'ihi na The Na on Monday 8th December 2014 13.03 UTC
"The Ihọd onye mepụtakwara mbụ wheel bụ onye iberibe,"Ihota mbubreyo ome nto ochi Sid Caesar, "Ihọd Chepụtara atọ ndị ọzọ: ọ bụ amamihe!"Ebere na nke a si ele ihe anya bụ bu pụta ụwa àgwà newcomers na Solowheel, ihe ọhụrụ, onye na-wheeled ụgbọala mepụtara American mmewe Shane Chen. Ọ bụ, na mbụ nnyocha, a monstrously arọ, okirikiri akpa, ihe dị ka ọkara otu mita ogologo, àjà ọ dịghị anya n'aka nke iga ọ bụla.
Iji seasoned pilot, Otú ọ dị, na Solowheel bụ ihe mara mma na-adaba adaba ọzọ ka ígwè, skuta ma ọ bụ Segway, ya ezigbo ikwu. M bụ dabara na-enweta ọkara otu awa nkuzi si Ray miri-iyi, a ụdị ọrụ afọ ofufo ọkwọrọikọ maka Solowheel onye, na 68, guzo ndụ agba na ụdị ụfọdụ nke na-emegide ịka nká Njirimara zoro ya workings. O doro anya na, ebe ọ bụ na ọ chọpụtara na igwe, o sonso ka ụkwụ na siri ike n'ala; gliding, kama, site na ndụ na boyish oké ọṅụ, ya ụkwụ nsinsi glued ejima nku a Solowheel.
Ịrapara miri-iyi si na ogwe aka dị ka a nkwarụ seabird gripping a dị n'elu ugwu-ihu, M mere gburugburu na infernal gburugburu na nsọtụ nke Granary Square, London, ebe nkà ụmụ akwụkwọ mutter akpọnwụ okwu ka ha na-agafe. "Ana m aga ala, Ray, M akụghịna,"M bellow, na ogwe aka m flapping na-adịghị asọpụrụ Chineke loops, o soothes m na okwu agbamume. The wheel si moto, ọ na-agwa m, e wuru gburugburu a "gyro-mgba ọkụ", nke na-eme ihe na ibu ibu nkesa gafee wheel. Dabere na-atụ, na moto accelerates; backward, ọ na-slows.
Site atụmatụ ụfọdụ na-, 20 nkeji niile bụ adị mkpa ka ị comfortably onwe astride na wheel: na-eme atụmatụ m nwere ike na anwa e mere site lissom, roba-limbed ọgbọ egwuregwu-ndiife na ogologo ọrụ na tightrope n'azụ ha. M na-eme kwa mgbede ruo otu izu na ike ugbu a na-eme jolted nri-n'akuku ibe, na ike dịkarịa ala efego ihe na-enweghị enyemaka nke a mgbidi ma ọ bụ a ibe. Na-egbu mgbu dị ka ọ bụ, M na-amanye anabata na m n'usoro n'etiti ala keugwu ọrụ nke Na. The editọ nnyemaaka, na nke mbụ ya foray, drifts gafee newsroom dị ka a akwukwo gafee a ọdọ mmiri. The ndịna nchịkọta akụkọ gbapụrụ ọsọ, tinyere ndị kanaal, a pint nke Amstel n'otu aka. The Jizọs na-ezipụ nchịkọta akụkọ a na-emeju negotiates ihe gaghị eme n'akụkụ n'agbanyeghị n'ala-ogologo mgbede uwe ọ na-eyi maka a na-eme n'ụlọ ndị mba ọzọ Press Association.
Ma, m na rapaara ya, ọ bụghị nanị na nke ọkachamara ọrụ ma ọ bụ iguzosi ike n'ihe na-miri-iyi, ma, n'ihi na nkenke ufodu nke nkwụsi ike na finesse nke ime n'oge omume na-eju afọ na-enweghị atụ. Ziri ezi na kpam kpam nkịtị wheel, ifufe enupụta m uwe, M chere na ike hụperetụ a ọdịnihu nke unpolluted boulevards, nke dị iche iche nke wheeled ọgụgụ ịkpafu gara aga, inyerịta bons Keywords na vaping. Ọ bụ a blissful ọhụụ, kwụsịrị obere mgbe m nkịta-legged sharply n'ime nsu.